Isiqalisi seChameleon, esona siqalisi simangalisayo somzuzu | I-Androidsis
UFrancisco Ruiz | | Ukusetyenziswa kwe-Android, Amacwecwe e-Android
Ngamanye amaxesha amaphupha, angenakwenzeka njengoko kubonakala ngathi, ayazaliseka. Injalo imeko yeli qela labaphuhlisi, abanomntu omnye kuphela umzobo wento abafuna ukuyiphumeza baye baqalisa ukusebenza, bade bafikelela Kickstarter.com yokunyusa ingxowa mali yakho Launcher entsha kunye neyoyikekayo, kwaye kwiinyanga nje ezimbalwa kamva sele iyinyani ngokwenza ukuba i-beta yokuqala ipapashwe kwiVenkile yokuDlala.
Umphanda ayikho enye into ngaphandle kwe Isiqalisi seChameleon, Uhlaziyo olupheleleyo kwihlabathi leedesika ze Android, ngakumbi ngakumbi uhlobo lwezixhobo amacwecwe.
Oku kuqala Beta, ngokwenkampani, yinguqulelo kwangaphambili ngendlela ye uvavanyo o vavanyo isasazekile ngabasebenzisi abambalwa abanethamsanqa, iyafumaneka ngoku kwifayile ye- Play Store njengovavanyo lwabasebenzisi abathenga isimemo kwiwebhusayithi yababhali.
Emva kokubona oko kubonwe kwividiyo yokubonisa, kwaye unikwe indleko yesicelo, ndicinga ukuba kufanelekile, kubo bonke abo basebenzisi Amacwecwe e-Android, ukuba nale Didibanisa njengaye Umsunguli weapp ngokungagqibekanga, kuba ibonelela nge-terminal yethu ngeempawu ezininzi ngakumbi kunye nemisebenzi yayo eya kuthi yenza olona hlobo lwesixhobo.
Ukuze uyisebenzise emva kokukhuphela kwifayile ye- Play Store, kufuneka ufake iwebhusayithi yababhali, thenga usetyenziso nge $ 10 kwaye kusuku olunye lweshishini uyakufumana isimemo onokuthi wenze ngaso imveliso.
Oku kuyakwenziwa ngokulandela imiyalelo eneenkcukacha kwi Ngeposi ukwenziwa kwaye wamkelekile Isiqalisi seChameleon.
Enye indlela yokufumana esi siqalisi esimnandi kukuba bekukho umncedisi ngomnikelo kwiprojekthi usebenzisa iphepha Kickstarter.comUkuba kunjalo, uyakufumana isimemo setyala lokuqalisa kwintsuku ezimbalwa ezizayo.
Ngayiphi na imeko, a imbumbulu o Didibanisa Ngokuqinisekileyo kwiinyanga ezizayo kuyakunika okuninzi ukuba kuthethwe ngako, kwangaxeshanye kubizelwe ukuphawula umendo omtsha kwihlabathi iziqalisi ze-Android.
Iinkcukacha ezithe xaxe - I-Apex Launcher, esona siqalisi silungileyo se-Android 4.0, Kickstarter.com, ivenkile.chameleonlauncher.com
Khuphela-isiKhanyisi sokuqalisa iBeta
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Amacwecwe e-Android » I-Chameleon Launcher Beta, isindululi esikhethekileyo seetafile
UYago Rosa Fernandez sitsho
"Kubekho umntu osebenzisana naye ngokunikela kwiprojekthi"
Ayisiyokunikela, kuba ufumana into esele imiselwe njengembuyekezo. Ukubuyiselwa kwemali kwindawo yesixa AKUFUNI ukunikela, kukutyala imali kwimbono
Phendula uYago Rosa Fernández
Kulungile kodwa uyifumene ngokuchanekileyo, yile nto ibalulekileyo
Hayi, akuqondwa. Andikhathali nokuba iyaqondwa ukuba ayingumnikelo, nokuba ujonge phi. Nabani na otyale imali yakhe uyenzile ukuze umbono uphume kwaye ngembuyekezo bafumana into, ayisiyombuyekezo kude. Ukuba kuyaqhubeka kuthethwa ukuba ukubuyiswa kwemali yiminikelo, akuyi kubakho nto ngaphandle kokudideka kubo bonke
Kudala ndityala imali kwiiprojekthi ezinje ngezi kwaye ayikhange ibe ngumnikelo, ndiyichazile amaxesha aliwaka kwaye ndihlala ndisithi le ndlela ukunikela ngayo ayenzeli mntu
Kucace gca, kwakamsinya nje ukuba ndinexeshana ndilungisa
Nge-14/08/2012 ngo-14: 31, «Disqus» wabhala:
Ubomi beMonster, phakamisa izilo zakho kwi-Android